« Inona no atao hoe startup? »
Ito horonantsary fohy ito dia manazava amin’ny fomba tsotra ny atao hoe startup. Ny Antony nanaovana azy ity dia misy ny fahadisoankevitra matetika amin’ny fampiasana io teny hoe startup io.
Rehefa miteny ny olona dia lazaina fa startup daholo izay orinasa vaovao rehetra vao niforona. Tsy izay nefa no izy ary tena diso izany.